ချစ်စိတ်မရည်ရွယ် | CeleTrend
July 30, 2020 by CeleTrend
နှဖူးထက်က ချွေးစလေးတွေကို လက်ခုံနဲ့တို့သုတ်ရင်း ရှင်းလက်စအမှိုက်တွေကို အမှိုက်ပုံးထဲ ထည့်လိုက်သည် အရာရာ နေရာတကျရှိမရှိ ဝေ့ဝဲကြည့်လိုက်ရင်း ကျေနပ်ဟန် ပြုံးသွားကာ အခုမှ စိတ်သက်သာသည့်ဟန်နှင့် အမှိူက်ပုံးနား တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်ချလိုက်သည် ခန့်ငြားသည့် ကုတင်ကြီးပေါ်မှ ပန်းပွင့်အကြီးကြီးပုံတွေနဲ့ ခင်းထားသည့် မွေ့ယာ ဖက်လုံး ခေါင်းအုံး စောင် အရာရာ စနစ်ကျဖြစ်သွားပြီမို့ ကိုကို့အခန်းလေးက နေချင်စဖွယ် အသွင်ကိုဆောင်နေသည် အိစက်သည့် ဒီမွေ့ယာပေါ်မှာ ကိုကိုအိပ်မည့်ပုံစံလေးကို မျက်လုံးလေးမှေးကာ ပုံဖော်ကြည့်ရင်း ရှင်းသန့်သည့် မျက်နှာလေးပေါ်မှာ စွဲမက်ဖွယ်အပြုံးလေး ရှပ်ပြေးသွားသည်
မြလေး ဒီအိမ်ကြီးကိုရောက်တာ ၅နှစ်ပင်ကျော်ခဲ့ပြီမို့ ဒီအိမ်သားတွေနဲ့ မြလေးဆိုတာ မိသားစုဆိုလျင်မမှား ဦးဖေနှင့်ကိုကိုတို့ကပင် မြလေးကို အိမ်ဖော်(အိမ်ပေါ်)လို့မသုံး ဘယ်သူမေးမေး အိမ်သားတစ်ယောက်အဖြစ် အရာသွင်းကာ တူမ ညီမစသည်ဖြင့် ပြောပြလေ့ရှိသည်
မှတ်မိသေးသည် ရောက်ခါစတုန်းက မြလေးအသက်မှ ၁၄.နှစ်ပဲရှိသေးသည် ဆက်သွယ်ပေးသည့် အဒေါ်ကြီးမှ ဒီအိမ်က ဦးဖေတို့ဆီမှာ အပ်နှံရင်း အိမ်သားတွေနှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည် ရောက်ခါစမို့ အရာရာအစိမ်းသက်သက်ဖြစ်ကာ အားငယ်ခဲ့ရပေမယ့် အိမ်အကူ အဒေါ်ကြီး ဒေါ်လေးကြူရဲ့ အားပေးနှစ်သိမ့်မှုအပြင် မြလေးထက် ၉နှစ်ပိုကြီးသည့် ကိုကို့ရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေနဲ့အတူ သူဌေးကတော်ပေမယ့်မာနမကြီးတတ်ပဲ သမီးအရင်းသဖွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသော ဒေါ်လေးယုကြောင့်သာ နေရာသစ်မှာ အမြန်ပင် နေသားတကျဖြစ်ခဲ့သည် အခု ဒေါ်လေးကြူနဲ့ ဒေါ်လေးယုက ဆုံးပါးသွားကြပြီမို့ အနည်းငယ်အဖော်မဲ့သလို ခံစားရပေမယ့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စေသည့် အရာတစ်ခုက မြလေးရင်ထဲမှာ ကွန်းခိုနေသည်
ထိုအရာသည် မြလေးရုံဆိုသော ၁၉နှစ်အရွယ်မိန်းမပျိုလေးကို အချိန်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်း ကြည်နူးနေတတ်အောင်သင်ပေးသလို တစ်ယောက်ထဲနေချိန်မှာတောင် စိတ်ကူးနဲ့ ပျော်နေတတ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သည်.။ မှန်သည်..။မြလေးရဲ့ရင်ထဲ ထိုအရာဝင်ရောက်လာသည့်နေ့မှစ၍ မြလေးအတွက် သစ်ပင်လေးတွေက စကားပြောဖော်ဖြစ်သလို ပန်းပင်လေးတွေ ငှက်ကလေးတွေကလည်း မြလေးရဲ့ တိုင်ပင်ဖော် ရင်ဖွင့်ဖော်ဖြစ်လာသည်.။ မြလေးငေးမိသမျှနေရာတိုင်းမှာ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပန်းချီကားချပ်တွေ မရိုးအီနိုင်တဲ့ ရှုခင်းတွေကို ထိုအရာကပင် ဖန်တီးပေးသည်။ တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ မာနရှင်တွေအတွက် ဓားဖြစ်သလို ဘဝထင်သူအတွက် ပျားဖြစ်တတ်မှန်း ဈေးဝယ်ဘာဝယ်အချိန်လောက်သာ အပြင်ထွက်ခဲ့ရသော မြလေးရုံတစ်ယောက် မသိခဲ့တာအမှန်ပါ၅နှစ်တာကာလအတွင်း မြင်နေတွေ့နေရသည့်ကိုကို့ကို မသိစိတ်က တွယ်တာလွန်းခဲ့ကာ အဲ့စိတ်ကို အမည်တပ်ဖို့ မြလေးမဝံ့ရဲသူဌေးသားနဲ့အိမ်ဖော် ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်ကို မြလေးခက်ခက်ခဲခဲ မက်နေမိသည် တကယ်ဆို ကိုကိုရဲ့ရုပ်က မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကျလောက်သည့် ရုပ်အဆင်းမျိုးမဟုတ်ပေ.။ အဝတ်အစားနဲ့ အဆောင်အယောင်သာ ခွာချလိုက်ရင် ကိုကိုဆိုတာ ကူလီသမားသာသာ လူကြမ်းသာသာရုပ်ရည်မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ
စစ်ဦး ဘီလူး..အချစ်ဦး အရူးတဲ့ အရူးမလေး မြလေးအတွက်ကတော့ ကြမ်းတမ်းသည့်ကိုကို့ရုပ်ရည်ကို လေးစား အားကိုးချင်သည့် အတွေးနဲ့ ရင်ခုန်နေမိပြီ မြလေးရင်အခုန်ဆုံးက သန်မာသည့်ကိုကို့ကြွက်သားတွေ တုတ်ခိုင်သည့် လက်မောင်းနဲ့ ကျယ်ပြန့်သည့်ရင်ခွင်မှန်သည် ကိုကိုက လူချောတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် ကြွက်သားအဖုအထစ်နဲ့ မေးရိုးကျကျ မျက်ခုံးထူထူအပြင် ကျယ်ပြန့်ကာ အမွှေးထူလေးတွေပေါက်နေသော ကိုကို့ရင်ဘက်ကြီးက မြလေးကို မြူဆွယ်နေသယောင်။အဲ့ရင်ဘက်ထဲမှာ ခဏဖြစ်ဖြစ် ပုန်းနေချင်သည်.. တုတ်ခိုင်သည့်လက်မောင်းကြီးကို ဆွဲကိုင်ကာ ချွဲနွဲ့ချင်မိသည် အမှန်စင်စစ်..မိသားစုပမာနေနေပေမယ့် မြလေးအရွယ်ရောက်လာတာနှင့်အမျှ ကိုကိုအနေရှောင်လာသည် ဦးဖေကတော့ သိပ်မထူးခြား ကုမ္မဏီကိစ္စနဲ့လုံးပမ်းနေသူမို့ အတူတွေ့ရချိန်သိပ်မရှိသလို သိပ်ပြီးလည်း အရောတဝင်မရှိခဲ့။
အချစ်ကို ဘဝထင်မိတဲ့မြလေးအတွက် ပျားအဖြစ်သောက်သုံးချင်သည့်လူတွေထဲမှာ ဓနရှင်ကိုကိုပါ ပါဝင်နေမှန်း စသိရသည့်နေ့ကို မြလေးကြုံတွေ့ရသည့်အခါမှာတော့။ အဲ့သည်နေ့က ပုံမှန်အတိုင်း ကိုကို့အခန်းဝင်ရှင်းပေးရသည် ကျောင်းပြီးကတည်းက သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်သွားနေတတ်သည့်ကိုကိုက ဒီနေ့မှာတော့ ဘယ်မှမသွားပဲရှိနေသည် မြလေးလုပ်သမျှ ကုတင်ခေါင်းရင်းကို ခေါင်းအုံးလေးခုမှီရင်း ပြုံးကြည့်နေသညကိုကို့အရှေ့မှာအလုပ်လုပ်ရတာ သိပ်တော့မထူးဆန်းပေ ငယ်စဉ်ကနေ အခုထိ အကြိမ်ကြိမ်ကြုံဖူးနေကျမို့ ရှိုးတိုးရှန့်တန့်မဖြစ်သင့်ပေမယ့် မြလေး ရင်တွေခုန်နေသည် အလိုက်မသိစွာ ရင်ထဲတွင်နေရာယူထားသောအချစ်ကြောင့်လား ခါတိုင်းနဲ့မတူသောကိုကို့အကြည့်နဲ့အပြုံးကြောင့်လား မသဲကွဲ။ ပြောင်ဝင်းနေသော ကြမ်းပြင်ကို ပွတ်တိုက်နေ့သည့်မြလေး ကိုကို့ရှေ့မှာ ကုန်းကုန်းကွကွလုပ်နေရတာကို တမျိုးလေးခံစားနေရသည် . ဟန်မပျက်လုပ်နေရပေမယ့် အလုပ်မြန်မြန်ပြီးချင်ပြီ စွင့်ကားလုံးဝန်းသော မိမိတင်ပါးစိုင်တွေနဲ့ မကြီးလွန်းမသေးလွန်းသော ရင်သားတွေကို ကိုကိုငေးနေမလားလှည့်မကြည့်ဝံ့ပေမယ့် မသိစိတ်က ဝေဖန်ဆန်းစစ်နေမိသည်ကိုကိုဦးဒီကောင်မလေးကို သတိထားမိတာ ကြာပါပြီ မိမိအပေါ် ဘယ်လိုသဘောရှိသည်ကိုလည်း မိန်းမကျမ်းကျေသူမိမိပင်အသာထား အိမ်အလည်လာသည့် သူငယ်ချင်းများပင် ရိပ်မိနေကြပြီ တစ်နေ့တစ်ခြား ဖွံ့ထွားလာသော အရှိုက်အဟိုက်တွေနဲ့အတူ အချိုးအဆစ်ကျနလွန်းသော ဒီကောင်မလေးကို မိမိလည်း မပစ်မှားပဲ မနေနိုင်။ ကျော်မကောင်းကြားမကောင်းတွေ ဖြစ်မည်စိုး၍သာ ရှောင်နေရပေမယ့် မိမိသည်လည်း ငါးကြော်မကြိုက်သည့် ကြောင်မိုက်မှမဟုတ်တာ
ဒါပေမယ့် အပျိုရိုင်းလေးမို့ အကိုင်အတွယ်မှားမှာစိုးရသည် နောက်ပြီး မိမိစိတ်က တစ်မျိုး..ဒီကောင်မလေးကို လုံးဝချစ်ကြည့်လို့မရသူ့ရဲ့အချစ်ကို မလိုချင် သူ့ရဲ့ ချိုမြိန်ချင်းတွေသာ သောက်သုံးချင်မိသည် ဒါကြောင့်လည်း အချိန်ယူကာပြင်ဆင်မှုအဖြစ် မိမိအခန်းကို တမင်ရှုပ်ပွစေကာ နေ့စဉ်ဝင်ရှင်းခိုင်းသည် မိမိလိုချင်တာ ရပြီးလျင်တောင် မိမိအနေနဲ့ တာဝန်ယူစရာမလိုမယ့်နည်းလမ်းတွေတောင် ကြိုစဉ်းစားထားသည် ဒီနေ့ ပထမခြေလှမ်းစရမည်အတွေ့အကြုံများသူမို့ သိပ်မရှိန်မိပေမယ့် ရင်တွေတော့ခုန်နေသည် ကြည့်ဦးလေ မိမိရှေ့မှာ လက်တစ်ဘက်ထောက် ကျန်လက်တစ်ဘက်က ကြမ်းတိုက်အဝတ်ကိုကိုင်ပြီးကြမ်းတိုက်နေသည် ဒူးထောက် လက်ထောက်ပုံစံမျိုးမို့ သေးသွယ်တဲ့ခါးရဲ့နောက်မှာ စွင့်ကားသည့်တင်ပါးစိုင်က လုံးဝန်းကာ တင်းနေသည် ရှေ့တိုးနောပ်ဆုတ်လုပ်လိုက်တိုင်း ဘေးတစ်ဘက်စီ ခွဲချထားသည့်ဆံနွယ်ရှည်ရှည်လေးတွေက ရှေ့နောက် ခါးရမ်းနေပုံလေးကလည်း ဆွဲကိုင်ဆောင့်ပစ်ချင်စရာ အနည်းငယ်လည်ဟိုက်နေသည်မို့ ဖြူဖွေးသည့်ရင်သားတွေကို တခါတရံမြင်နေရသည်
ကြည့်နေရင်းပင် ဖွားဖက်တော်ကိုရွှေလီးက ပုဆိုးကြားမှာတင်းလာကာ ပုဆိုးအတွင်းမှ မာန်ဖီကာ ထောင်နေပေပြီ ဟော..ကြမ်းတိုက်တာပြီးသွားသည့်မြလေးက မှန်တင်ခုံပေါ်ကို အဝတ်နဲ့သုတ်နေသည် မှန်ထဲမှာတော့ ရှင်းသန့်သည့်မျက်နာလေးက ချွေးစတချို့နဲ့အတူ စွဲမက်စရာ ပေါ်လာသည်အစီအစဉ်စဖို့ အချိန်တန်ပြီမို့ ကုတင်ပေါ်မှဆင်းကာ မြလေးဆီ ဖြေးဖြေးလေး လျှောက်လာခဲ့သည်ကြမ်းတိုက်လို့ပြီးပြီမို့ ကိုကို့ရဲ့မှန်တင်ခုံကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနေသည့်မြလေး မှန်ထဲမှတဆင့် မိမိရဲ့နောက်ကျောအလှကို စိုက်ကြည့်နေသောကိုကို့ကြောင့် ရင်ဖိုသွားကာ ခေါင်းငုံ့ရင်း ပင်ကိုယ်ပြောင်နေပြီးသော မှန်တင်သည့်ခုံပေါ်ကို ပွတ်တိုက်နေမိသည် သိပ်မများသည့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကို စီနေခိုက် ကိုကို ကုတင်ပေါ်မှဆင်းလာတာကို မှန်ထဲမှတဆင့်မြင်ရသည် ရှက်စိတ်နဲ့မျက်နာလွှဲချင်ပေမယ့် မသိစိတ်က ကိုကို့ဟန်ကို အရမ်းပဲ မြင်ချင်နေသည်မို့ မှန်ထဲကို မကြာမကြာကြည့်မိသည်..။
အိုမိမိရဲ့နောက်ကျောနားမှာရပ်ပြီး မိမိတစ်ကိုယ်လုံးကို စားတော့မည့်အတိုင်း စိုက်ကြည့်ပြုံးနေသည့်ကိုကို့ကြောင့် အိုခနဲ အသံတိတ်ရေရွတ်မိကာ လက်ကလဲ ကိုင်မိကိုင်ရာ ဆွဲမိဆွဲရာ ဆွဲလိုက်မိသည်မို့ ခုံပေါ်မှ ခေါင်းလိမ်းဆီဗူးက လက်နဲ့တိုက်ခါ ပြုတ်ကျသွားသည် ဒေါက်ခနဲမြည်တဲ့အသံက သိပ်မကျယ်ပေမယ့် မြလေးကတော့ ခန္ဓာကိုယ်လုံး တုံသွားသည်အထိ လန့်မိကာ ကပြာကယာပင် ကုန်းကောက်မိသည်ဒုန်းအ. အသံနှစ်ခုက တကယ့်ကို မရှေးမနှော ရှက်စိတ်နဲ့ အလောတကြီးငုံ့မိသည်မို့ မှန်တင်ခုံနဲ့ နှဖူးနဲ့စောင့်မိကာ မြလေးမျက်ရည်ဝေသွားသည် နှဖူးကို ပွတ်နေရင်း အခုထိမထဖြစ် ခေါင်းထဲ ဝေသွားလောက်အောင် ထိချက်ပြင်းသည်ကတစ်ကြောင်း ကိုကို့ရှေ့မှာ ဣနြေ္ဒပျက်လွန်းနေသည့်မိမိကိုယ်ကိုယ်အားမရသည်အထဲ နောက်ထပ်အမှားတစ်ခု ထပ်ကြူးလွန်မိသွားသလိုပဲမို့ ခေါင်းလေးငုံ့ကာ ကျောပေးလျက်ပင် ထိုင်နေမိသည် သိပ်မကြာလိုက်..ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ဆွဲထူလာတာမို့ အလိုက်သင့်ထရပ်မိသည်..ဒါက ဒုတိယအမှားမှန်း မာထန်ထန်အချောင်းတစ်ခုက လုံခြည်အပေါ်မှတဆင့် ဖင်ကြားအထောက်ခံရတော့မှ သိလိုက်ရသည်
အတွေ့အကြုံမရှိပေမယ့် မိမိဖင်ကြားကအရာကိုတော့ မြလေးကောင်းကောင်းသိသည် ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ရမလဲ မသိတာမို့ ခေါင်းငုံကာ ဆက်ရပ်နေမိတော့ ကိုကိုက ခါးကိုညွှတ်ခါညွှတ်ခါ ညှောင့်သလိုလုပ်နေသည် မြလေးလက်ခံသင့်လား လက်မခံသင့်ဘူးလား မသဲကွဲ ဝေခွဲရခက်နေစဉ် ကိုကိုက ပုခုံးလေးကိုင်ကာ အသာအယာဆွဲလှည့်လာသည် အခုတော့ မိမိရင်ခုန်ခဲ့ရသော ကိုကို့ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးရဲ့အနီးမှာ မြလေး ခေါင်းလေးငုံကာ ရပ်တန့်နေမိသည် ကိုကိုက မြလေးရဲ့မေးစေ့လေးကို ဆွဲယူ မော့စေပြန်သည် ပင်ကိုယ်ကျော့ညွတ် သန်စွမ်းသော မျက်တောင်တွေကို မပုတ်ခက်မိပဲ ကိုကို့နှုတ်က စကားသံတစ်ခုကို မျှော်လင့်တကြီး စောင့်ဆိုင်းနေမိသည်..။ (ပြောပေးပါကိုကို ချစ်တယ်လို့ ပြောပေးစမ်းပါ အဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့တင် ကိုကိုလိုချင်တာပေးဖို့ မြလေးဘက်က အသင့်ပါကိုကိုရယ် ပြောစမ်းပါ ပြောပါကိုကို ပြောပေးပါကိုကိုရယ်) ပဲ့တင်ထပ်အောင်ပြောခဲ့ပေမယ့် နှုတ်ဖျားကတော့ ထွက်မလာ မြလေးနှုတ်ခမ်းတွေ တုံယင်လာသည့်တိုင်အောင် စကားလုံးတွေက လည်ချောင်းဝမှာပင် တစ်ဆို့ပျောက်ကွယ်သွားကြသည် ဟော..ကိုကို့နှုတ်ခမ်းတွေလှုတ်လာပြီ လှုတ်လာပြီ မိမိအရမ်းကြားချင်သောစကားကို ကိုကိုပြောတော့မယ်ထင်သည် အတွေးနဲ့အတူ ရင်ခုန်စွာ မျက်လုံးလေးမှိတ်ရင်းနားစိုက်ထောင်နေမိသည် ဘယ်လောက်တိုးတိုး ကြားခွင့်ရရင်ကျေနပ်ပြီလေ
အို. ဒုတိယအကြိမ် အသံတိတ်ရေရွတ်မိပြန်သည် ကိုကို့ထံက ဘာအသံမှထွက်မလာပဲ တုံယင်နေသည့် မိမိနှုတ်ခမ်းကိုသာ အငမ်းမရ စုပ်နမ်းလာသည် မျက်လုံးလေးပြူးကာ သူ့ရင်ဘက်ကြီးကိုတွန်းရင်း ငြင်းဆန်ဟန်ပြခဲ့ပေမယ့် ကိုကိုကတော့ ရပ်မသွား နှုတ်ခမ်းတစ်ခုလုံး ကိုကို့တံတွေးတွေနဲ့ စိုရွှဲသည်အထိ ပြင်းရှစွာစုပ်နမ်းရင်း ကိုကို့လက်တွေကလည်း အရပ်ကွာဟမှုကြောင့် ခြေဖျားလေးထောက်ကာ ရင်ကော့ခံနေရသော မြလေးရဲ့ခါးလေးကို တစ်ဖက်က တင်းတင်းဖက်ထားတာ ကျန်တစ်ဖက်ကလဲ တင်းပါးတွေကို ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်လာသည်
အချိန်အတော်ကြာနမ်းမိခဲ့ပြီး နောက်မှာတော့ အပျိုစင် မြလေးမှာ မောဟိုက်သလိုခံစားလာရကာ ကိုကို့ရင်ခွင်ထဲ မှီတွဲ့ကာ ငြိမ်သက်အမောဖြေနေမိသည်။ „ ကိုကို မြလေးကိုလေ„ ရင်ခွင်ထဲ ပါးလေးအပ်ကာ မှီတွယ်ရင်းက ချစ်လားလို့မေးချင်သည့်စိတ်ကို ထိန်းမရစွာ မေးမည့်ဟန်ပြင်ပြီးက နှုတ်က မထွက် သူ့အလိုလိုပြောလာသည့် ချစ်စကားမျိုးကိုပဲ ရူးရူးမိုက်မိုက် မျှော်လင့်မိပြန်သည် အစုပ်ခံ အနမ်းခံ အထောက်ခံ အနယ်ခံပြီးသည့်တိုင်အောင် ကိုကို့ထံက ချစ်စကားကို မြလေးကြားခွင့်မရသေး ကိုကို့ရဲ့အနမ်းကြမ်းတွေကြောင့် ပြင်းထန်သည့်ရမက်လှိုင်းက မြလေးရဲ့သွေးကျောတစ်လျှောက် ဆူပွက်လာခဲ့သလိုတစ်ဖန် ရူးသွပ်မိတဲ့နှလုံးသားလေးက ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကို အငမ်းမရ ကြားချင်နေမိသေးသည်..။ ကိုကိုက မှီတွယ်နေသည့်မြလေးရဲ့ ပုခုံးပေါ်ကို လက်နှစ်ဘက်တင်ကာ ဖိချရင်း တပြိုင်ထဲပင် သူ့ပုဆိုးကိုပါ ချွတ်ချလိုက်သ
အို..! တုတ်ခိုင်ရှည်လျားသည့် ကိုကို့လိင်တန်ကြီးက မြလေးရဲ့မျက်နာရှေ့မှာ ခါရမ်းနေသည် တုန်လှုတ်မင်သက်စွာ မော့ကြည့်မိတော့. „ ကိုယ် ကိုယ်လေ မြလေးကို ” မြလေး ခေါင်းပြန်ငုံ့ရင်း ကိုကို့ထံက နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့်စကားကို အသက်မရှူတမ်း နားထောင်မိသည် နောက်လာမည့်စကားတစ်ခွန်းနဲ့တင် မြလေးရှေ့က ကိုကို့လီးကြီးကို ကိုင်တွယ်လိုက်ဖို့လဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ” အရမ်းလိုးချင်တယ်ကွာ „ ”ရှင် ကို ကိုကိုရယ် အဟင့်ဟင့် ” ကိုကိုပြုသမျှ နုပေးခဲ့ရသည့်ရလဒ်က ဒါပဲလားဟင် အတွေးက လူကို အရမ်းဝမ်းနည်းသွားစေတာမို့ ရှိုက်ငိုရင်း ဘာဆို ဘာမှမပြောချင် မသိချင်လောက်အောင်ဖြစ်ရသည် မိမိရှေ့မှာ လီးတန်းလန်းဖြင့်ရပ်နေသောကိုကို့ကို တစ်ချက်ကြည့်ကာ လှစ်ခနဲ ပြေးထွက်လာခဲ့သည် ဂျုန်းဆိုတဲ့ တံခါးပိတ်သံနဲ့အတူ ကိုကိုတစ်ယောက် ဘယ်ပုံဘယ်နည်းကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို မြလေးမမြင်ရတော့ ရေချိုးခန်းတံခါးကို လော့ချရင်း အားရသည်အထိ ရှိုက်ငိုမိသည်။
သူများတကာတွေအတွက် အချစ်က လေပြေပါ မြလေးအတွက်ကတော့ အချစ်ဆိုတာ မုန်တိုင်းတစ်ခုပင်။ မြလေးရင်ထဲက အချစ်ဟာ လေပြေဆိုရင် ကိုကိုသယ်ဆောင်လာသည့်အရာကတော့ မုန်တိုင်းပါ.။ လေချင်းတူပေမယ့် သက်ရောက်မှုကွဲပြားသလို မြလေးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ကလဲ ဦးတည်ချက်ချင်းတူပေမယ့် ရည်ရွယ်ချက်ချင်း ကွဲပြားခဲ့သည်။
ထိုနေ့မှစ၍ မြလေးကိုကို့အနား မသွားရဲ ကိုကို့အကြည့်ကို ရင်မဆိုင်ရဲတော့တာမို့ တတ်နိုင်သမျှ မတွေ့အောင် ရှောင်နေဖြစ်သည် တစ်အိမ်ထဲအတူနေရတာမို့ မလွှဲသာမရှောင်တွေ့ရတယ်ဆိုပေမယ့် အရင်လို နှစ်ယောက်တည်းမဆုံဖြစ်အောင် သတိထားဖြစ်သည်..။ ခြားနားသွားတဲ့နေထိုင်မှုတွေနဲ့အတူ အေးစက်စက် ဆက်ဆံရေးတွေကြောင့် နှစ်ဦးလုံး မပျော်နိုင်တော့သို့သော်.လောကမာယာထက် ယောက်ျားမာယာကပိုမိုကြောက်ဖို့ကောင်းတတ်မှန်း အချိန်နှောင်းမှ သိရပြန်သည် အရင်လို အပြင်သွားလာခြင်းမရှိတော့သည့်ကိုကို့ကြောင့် သူ့သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်ရောက်ရောက်သည် အားလုံးဟာ သူဌေးသား လူ့ပေါ်ကျော့တွေချည်းပဲမို့ အချိန်တွေ ပိုနေဟန်ရှိသည်။ မနက်ကတည်းက ရောက်လာတတ်ပြီး စားကြသောက်ကြနှင့်မို့ မြလေးမှာ အမြည်းလုပ်ပေးရပြန်သည် သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေမို့လားမသိ စကားပြောရင် ပွင့်လင်းလွန်းနေတတ်တာကို သတိထားမိသည်..။
အဲ့ဒီနေ့က အမြည်းချပေးပြီး လှည့်ထွက်လာခဲ့ကာ မိမိအခန်းထဲ စာဖတ်နေမိသည် အချိန်အတော်ကြာတော့မှ အတွေးတစ်ခုဝင်လာကာ အရက်သောက်နေကြသော ကိုကို့အခန်းဆီ တိတ်တဆိတ် ချဉ်းကပ်ကာ အထဲမှအသံကို နားစွင့်ကြည့်သည်”အဲဒါ မင်းမှားတာပေါ့ဟ ဘယ့်နှယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကြိတ်ခိုက်နေတဲ့မိန်းခလေးကို အကြမ်းကိုင်ရတယ်လို့ „ ” ဟင်.! စစချင်းကြားရသည့်စကားကြောင့် မြလေးသိမ့်ခနဲတုံသွားသည် သူ သူတို့ သိနေပြီလား ကိုကိုပြောပြထားတာလား ဘယ်လောက်အထိပြောပြထားလဲ ရှက်စိတ်နဲ့အတူ သိချင်စိတ်က ရောထွေးနေသည် ( ကိုကိုရယ် မြလေးအရှက်ကိုတောင် မငဲ့ပဲ ပြောရက်ခဲ့တယ်လား ) ရင်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းစိတ်က ခိုဝင်လာသည် ” ဟုတ်တယ် ကိုဦး ငအောင်ပြောတာမှန်တယ် တကယ်ဆို ချစ်တယ် ဘာညာပြောပြီးလုံးရင်းတောင်ရနိုင်တာ အသိသာကြီး မင်းက ချစ်တယ်မပြောပဲ လိုးချင်တယ်ပြောမှတော့ ဟိုက မင့်လီးကို မစုပ်တာမပြောနဲ့ လိမ်ချိုးမပစ်တာ ကံကောင်း „ ” အို.. ဒါ ဒါ ဒါဆို သူတို့အကုန်သိပြီးပြီပေါ့ ကိုကိုက သောက်လက်စ အရက်ခွက်ကိုအသာချရင်း ဟိုနှစ်ယောက်ကို အ.ရန်ကောဟူသောအကြည့်ဖြင့် တစ်ချက်ကြည့်ကာ ”မျိုးကြီးရာ ငါပြောပြီးပြီပဲ ငါက သူ့ကိုမချစ်ဘူးလို့ အေး မင်းတို့ပြောသလိုငါလုပ်ခဲ့ရင် အခုချိန်သူ့ကို လိုးလို့ရတာတော့မှန်တယ် ဒါပေမယ့် ငါလိုးချင်တာက ချစ်သူလို ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး ငါလိုချင်တာကလဲ ချစ်သူမဟုတ်ဘူး ခံစားဖော် ခံစားဘက်ပဲလိုချင်တာ ရှင်းပြီလား „ ပြောရက်လိုက်တာ ခံစားဖော်ခံစားဘက်..တဲ့လား အပျိုစင်မှန်းသိလျက်နဲ့ ချစ်နေမှန်းလဲ သိလျက်နဲ့ ဒီလိုအတွေးမျိုး တွေးနေတာတဲ့..လား အတွေးနဲ့ ဝမ်းနည်းနေစဉ်မှာပင် စကားသံက ပျံ့လွင့်လာပြန်သည်
” မင်း သူ့ကိုမချစ်တာ သေချာလား ငအောင်ဆိုသူရဲ့ အမေးကြောင့် မြလေးအမှတ်နည်းစွာ ရင်ခုန်မိပြန်သည် ” အေး သေချာတယ် „ ပျက်တောင်းတဲ့ ကိုကို့ရဲ့ဖြေသံကို မြလေးမအံ့ဩချင်တော့ မျက်ရည်ကိုသုတ်ကာ လှည့်ပြန်မည်အလုပ် ” ဒါဆို သူ့ကို ငါတို့နှစ်ယောက် လိုးမယ်ဆိုရင်ရော မင်း လက်ခံနိုင်လား „ ” ဟင်.! ထပ်ဆင့်ကြားရသည့်အမေးကြောင့် မြလေးတုန်သွားကာ ကိုကို့မျက်နာကို တံခါးအဟကြားမှတဆင့် ကြည့်မိသည် ကိုကိုက မျက်ခုံးပင့်ကြည့်ရင်း ” အမှန်အတိုင်း ဖြေရမှာလား ” အေး ဖြေ „ တကယ်ဆို မြလေးဆက်ပြီးနားမထောင်သင့်တော့ ဒါမဲ့ ကိုကို့ရဲ့အဖြေကို သိချင်စိတ်က မပယ်ဖျက်နိုင်တာမို့ မသွားသေးပဲ ရပ်နေမိသည်
” ငါ မလိုးရသေးခင် မင်းတို့လိုးရင်တော့ စိတ်ဆိုးမိမှာပဲ ငါလိုးပြီးရင် မင်းတို့သဘော ငါ့ဘက်က အေးဆေးပဲ „ ပြတ်သားလွန်းတဲ့ ကိုကို့ဖြေသံနဲ့အတူ မြလေးမျက်ဝန်းထဲက မျက်ရည်တွေ ရပ်တန့်သွားရပြီ ကိုကို့ရင်ထဲမှာ မြလေးအတွက်ရမက်တွေကလွဲရင် ဘာမှမရှိတာသိရပြီးသည့်နောက် ဘာခံစားချက်မှမထားချင်တော့ အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ကာ ပြန်အလှည့် အခန်းထဲမှ ဖုန်းရင်းတုံးသံကြားရသည် ဘယ်သူ့ဆီကလာလာ မိမိနှင့်မဆိုင်ပေမယ့် ကိုကို့ရဲ့ထူးသံကြောင့် ထွက်မသွားဖြစ်သေးပဲ နားထောင်မိသည် ” မဟုတ်ဘူးအဖေ သား အခုအိမ်မှာပဲ ” ဗျာအခုလား ” အော် ဟုတ်ဟုတ် သားအခုလာခဲ့မယ် ဖုန်းချသွားပီမို့ သူထွက်မလာခင် မြလေးလည်း ကပြာကယာ ထွက်လာခဲ့တော့သည် အခန်းထဲရောက်တော့ အတွေးပေါင်းစုံနဲ့ ငိုင်တွေမိရင်း နယ်ကိုပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကာ အဝတ်အစားတစ်ချို့ကို အိတ်ထဲထည့်ရင်း ၅နှစ်တာ နေခဲ့ရသောအခန်းလေးကို သံယောဇဉ်မပြတ်စွာ ဝေ့ဝဲကြည့်ရင်း သူတို့ရဲ့စကားသံတွေက နားထဲကို အစီအရီဝင်လာသည်
( ငါမလိုးရသေးခင် မင်းတို့လိုးရင်တော့ စိတ်ဆိုးမိမှာပဲ ) (ငါလိုးပြီးသွားရင် မင်းတို့သဘော ) (ငါမလိုးရသေးခင် မင်းတို့လိုးရင်တော့ စိတ်ဆိုးမိမှာပဲ ) (ငါလိုးပြီးသွားရင်တော့ မင်းတို့သဘော ) (ငါမလိုးရသေးခင် မင်းတို့လိုးရင်တော့ စိတ်ဆိုးမိမှာပဲ ) (ငါလိုးပြီးသွားရင်တော့ မင်းတို့သဘော ) ပဲ့တင်ထပ်စွာကြားယောင်နေသည့်ကိုကို့အဖြေ မြလေး အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ရင်း ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချလိုက်သည်ချက်ချင်းပင် မှန်ရှေ့ထိုင်ချလိုက်ကာ ငိုထားသည်ကြောင့်ပျက်ပျယ်နေပြီဖြစ်သောပါးပြင်ထက်က သနပ်ခါးတွေကို ပြန်ဖျက်ကာ အသစ်ပြန်လိမ်းရင်း ဆံကျစ်ကျစ်ထားတာကို ဖြည်ချလိုက်ရင်း အရင်းနားမှာစုစည်းလိုက်ကာ တဖန် လုံခြည်ကိုညီညာစွာပြန်ဝတ်ရင်း အပေါ်အိင်္ကျီကိုလည်း ကိုယ်ကြပ်ပန့်ထဲက ရွေးဝတ်လိုက်သည် အထက်နဲ့အောက် လိုက်ဖက်မှုမရှိပေမယ့် ကပိုကရိုဆန်မှုနဲ့အတူ ခပ်ကြပ်ကြပ်အဝတ်အစားတွေကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းများ ပိုမိုပေါ်လွင်လာသည်
အပျိုစင်မိန်းမငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်အတွက်ချမှတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာ နောင်တတွေမပါ ခပ်မဲ့မဲ့ပြုံးရင်း ဖုန်းလေးကိုလက်ကကိုင်ကာ ကိုကို့အခန်းဆီ ရဲဝံ့စွာ လျှောက်လာခဲ့လိုက်သည်။ အခန်းထဲ ဝင်လာသည့်မြလေးကို ဟိုနှစ်ယောက်ငေးကြည့်နေကြသည် တစ်ယောက်မျက်နာတစ်ယောက်ကြည့်ကြရင်း မေးငေါ့ကာ ဘာလဲဟူသောအထာဖြင့် အချင်းချင်းမေးနေကြသည်။မြလေး သူတို့နှစ်ယောက်ရှေ့က စားပွဲခုံပေါ် ဖုန်းလေးတင်လိုက်ကာ ” ရှင်တို့နှစ်ယောက် ကျမကို တကယ်လုပ်ချင်လား ?. ရုတ်တရက် ဘယ်လိုမှမထင်မှတ်ထားသည့်မေးခွန်းမို့ ကိုအောင်ရော ကိုမျိုးပါ ကြောင်သွားသည် ဘာပြန်ဖြေရမှန်းမသိခင်မှာပဲ မြလေးက စာရေးစားပွဲဆီသွားကာ စာရုတ်နှစ်ရွက်ပေါ်ကို မတူညီသည့်စာတစ်ချို့ရေးလိုက်ကာ ဖြဲယူ ခေါက်လိုက်ရင်း တဖန် ကိုအောင်တို့ဆီပြန်သွားကာ စားပွဲပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်ရင်း” တစ်ရွက်ဆီ ယူလိုက် „ ကိုအောင်ရော ကိုမျိုးပါ ကြောင်တောင်တောင်ဖြင့်ယူလိုက်ကြသည်..။
ဖွင့်ဖတ် ကိုယ်ယူထားတာ ကိုယ်ပြောပြ „ အခုအချိန်အထိ ဘာဆို ဘာမှနားမလည်ပေမယ့် လက်ထဲအသီးအသိ်းရှိနေသည့်စာရွက်ခေါက်ကို ဖွင့်ကြည့်ရင်း အသံထွက် ဖတ်ပြကြသ။ ( ပထမ.အရင်ကြိုက်သလို လုပ် ) ( ဒုတိယ..ဖုန်းကိုင် ဗီဒရို ရိုက် ) ” ဟာ ! ” ဟာ! တစ်ပြိုင်ထဲလိုလို အာမေဍိတ်သံများထွက်ပေါ်လာပြီး ပြိုင်တူပင် မြလေးကို မော့ကြည့်ကြသည် မြလေးရဲ့မျက်နာပေါ်မှာ ဘာခံစားချက်မှမရှိ မပြုံးသလို မဲ့လည်းမမဲ့ ကိုအောင်ရော ကိုမျိုးပါ အံ့ဩမင်သက်နေသည် ခုတ်ရာတစ်ခြား ရှရာတစ်လွဲဖြစ်သွားသည့်အခြေအနေကြောင့် ငိုရအခက် ရီရအခက်ပင် တကယ်တော့ တံခါးဝမှာ မြလေးရုံရောက်နေတာကြိုသိလို့ ကိုကိုဦးရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်း ပြောဖြစ်ကြသည် သူတို့ရဲ့စကားတွေကြောင့် မြလေးရုံစိတ်ထန်မည် ကိုကိုဦးက မြလေးရုံအခန်းထဲလိုက်ကာ လုံးမည် မိမိတို့နှစ်ယောက်က ဗီဒရိုခိုးရိုက် နောက်ကြုံရင် မိမိတို့ပါ မြလေးရုံကို စား စီစဉ်ထားသမျှနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေက ဆီနဲ့ရေ မိုးနဲ့မြေ ထင်တာထက်ပိုလွယ်နေပေမယ့် အဲဒီအလွယ်ထဲမှာမှ အလွဲတွေပါနေသည်မြလေးက သူတို့လက်ထဲမှစာကို တစ်ချက်လှမ်းဖတ်ရင်း ပထမစာရွတ်ရသူ ကိုအောင့်လက်ကိုကိုင်ကာ ကုတင်ဆီဆွဲခေါ်လာခဲ့သည်
” ကိုအောင် ဘာလုပ်ချင်လဲ လုပ်ချင်တာလုပ်ပါ အားမနာနဲ့ „ ” ကိုမျိုးက ဗီဒရိုရိုက်ပေးနော် ပြီးရင် အကိုလဲ ကြိုက်သလိုလုပ်ပေါ့ „ အခြေအနေကို သဘောပေါက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကိုအောင်ကြောင်နေသည် အပျိုစင်တစ်ယောက်အတွက် ဒီလုပ်ရပ်က အိမ်မက်ပင် မက်ဖို့မလွယ်ဘူးမဟုတ်လား ကိုအောင်က တွေတွေကြီးရပ်နေသည်မို့ မြလေးရုံအားမရစွာ စုတ်တစ်ချက်သက်ရင်း ဒူးထောက်ထိုင်ချကာ ကိုအောင့်ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်သည် မြင်လိုက်ရသည့်လီးက မပျော့မမာပုံစံနဲ့မရှည်လွန်း မတိုလွန်း.. ကိုကိုထက် အနည်းငယ် တိုမလိုရှိပေမယ့် အရွယ်အစားအားဖြင့်တော့ အတူတူလောက်ပင်ရှိမည်
ပြတ် .* အွန့် ထိထိမိမိကြီး တဝက်လောက်အထိငုံလိုက်ကာ တစ်ဖန်နှခမ်းသားနဲ့ဖိပြီးစုပ်ပစ်လိုက်သည်မို့ ကိုအောင်အသံထွက်ကာငြီးရင် တွန့်သွားသည် ” အကို မျက်နာရော လီးရောပါအောင်ရိုက်နော် ပြရမယ့်လူ ရှိတယ် „ မြလေးက ပြောလည်းပြော ကိုအောင့်လီးကြီးကိုလည်း ပြန်ငုံလိုက်ကာ အရင်းအထိစုပ်ပစ်လိုက်သည် တဖန် လီးအချောင်းတစ်လျှောက်ကို ဟန်ပါပါလျက်ရင်း လက်တစ်ဘက်ကလည်း မိမိရင်သားတွေကို ဆုပ်နယ်လိုက်သည် အခုတော့ဖုန်း ကင်မရာထဲမှာ အင်မတန်နုနယ်ချောမောသည့် မိန်းမပျိုတစ်ယောက် လီးတစ်ချောင်းကို မက်မက်မောမောစုပ်နေဟန် အထင်းသားပေါ်နေပေပြီ လီးအစုပ်ခံရသောကိုအောင်မှာ တအင်းအင်းငြီးရင်း မြလေးရဲ့ခေါင်းကိုဆုပ်ကိုင်ထိုးဆွကာ တဖန်ခါးကိုညွှတ်ကာညွှတ်ကာ မြလေးရဲ့ပါးစပ်ပေါက်ကို လိုးသည်။ ဖုန်းကိုင်က ဗီဒရိုရိုက်နေသော ကိုမျိုးလည်း မနေနိုင်စွာ အဝတ်တွေချွတ်လိုက်ရင်း လက်တစ်ဘက်က လီးကိုကိုင်ကာ ဆွလျက် ကိုအောင်နဲ့ မြလေးရုံတို့ရဲ့လိုးခန်းကို အပီအပြင်ရိုက်နေသည်
” အားးအားး မှ မှလေး „ အချိန်ကြာလာတာနှင့်အမျှ လိင်တန်တစ်လျှောက်စိုရွှဲကာ ကိုအောင်မှာ ဖီးလ်အပြည့်ယူရင်း မြလေးရဲ့ငယ်ထိပ်အထက်မှ ဆံပင်တွေကို စုရုံးကိုင်လိုက်ရင်း လိုးဆောင့်နေသည် မြလေးမှာ ခေါင်းကိုမော့ခံရင်း လီးအဝင်အထွက်အတိုင်းအလိုက်သင့် ခံနေရပေမယ့် မောဟိုက်သလိုဖြစ်လာကာ အသက်ရှူသံတွေ မြန်လာသည် ထို့အတူ အစောပိုင်းက ဘာခံစားမှုမှမပါပဲ နာကြဉ်းချက်သက်သက်နဲ့ ခံနေရပေမယ့် ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရဲ့လီးကြီးတွေကိုမြင်နေရကာ မိမိပါးစပ်ကိုလည်းအလိုးခံနေရသည်မို့ စိတ်တွေထန်လာကာ မက်မက်မောမောပင် အလိုးခံနေမိသည်
အားး မြလေး ကောင်းလိုက်တာကွာ ” အားး ကိုယ်ထွက်တော့မယ် အားး ကိုအောင်တစ်ယောက် ပါးစပ်ကပြောရင်း တစ်ဖြေးဖြေးအရှိန်တက်လာကာ မြလေးရဲ့ဆံပင်တွေကို တင်းတင်းဆွဲလိုက်ရင်း ပါးစပ်ကိုမနားတမ်းလိုးကာ ” အား ထွက် ထွက် ထွက်ကုန်ပြီ အမှန်ပင် ထွက်တော့မှာမို့လီးကိုအမြန်ထုတ်လိုက်ပေမယ့် ထုတ်ထုတ်ထွက်ထွက် ထွက်သွားသည်မို့ လီးရည်တွေက မြလေးရဲ့မျက်နာနဲ့ နှုတ်ခမ်းပေါ်ကို ပေကျံကုန်သည် ” ဆောရီး မြလေးရယ် ကိုယ်မရည်ရွယ်ပါဘူး „ ပြောလည်းပြော ပေနေသည့်လီးရည်တွေကို သုတ်ဟန်ပြင်တော့ မြလေးက လက်ကာပြရင်း ” ဟင့်အင်း မသုတ်နဲ့ ရပါတယ် ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ ပြောထားတာပဲ အကိုက သောက်ခိုင်းရင်တောင် မြလေးမငြင်းဘူး „ မျက်လွှာလေးချကာပြောရင်း လီးရည်ပေကျံနေသည့်မျက်နာလေးကို ကင်မရာဘက်လှည့်ပြရင်း ” ကိုမျိုးရော ဘာလုပ်ချင်လဲဟင် „ လီးအတောင်သားနဲ့ ဗီဒရိုရိုက်နေသောကိုမျိုးက တစ်ချက်ပြုံးပြရင်း ” ငအောင် မင်းရိုက်ပေးဦး ငါ မြလေးခေါင်းပေါ်ကို လီးရည်ဖြန်းပေးလိုက်မယ် ” လူအချိန်းအချက်လုပ်ကာ လီးရည်စိုနေသော သူ့လီးကြီးကို တစ်ချက်ကိုင်ရင်း မြလေးရဲ့ပါးစပ်ဝကို လာတေ့သည်
စုပ်ရမှာလားဟင် „ မျက်နာလေးမော့ကာ မေးပုံလေးက ကလေးလေးပမာ သူ့အမူအယာကြောင့်ကိုမျိုး လီးပိုတောင်လာကာ လိုးပစ်ချင်စိတ်တွေလည်း ပိုဖြစ်လာရသည် ”အင်းလေ မြလေးရဲ့ ဘာလဲ မစုပ်ချင်လို့လား ? ”ဟင့်အင်း မဟုတ်ပါဘူး„ စိုနေသည့်လီးထိပ်ဝကို လျှာနဲ့ယက်ရင်းဖြေတော့ ကိုမျိုးက ” အာ့ဆို ဘာလို့မေးတာလဲ မြလေးက „ ” ချချ. ကိုမျိုးအမေးကြောင့် မြလေးကရှက်ရယ်ရယ်ရင်း နှုတ်ခမ်းလေးစူကာ ” အလိုးခံချင်ပြီရှင့် သိရဲ့လား အဖုတ်စိုနေပီ မသိပဲနဲ့ ဟွန်း „ မြလေးရဲ့အဖြေကြောင့်ကိုမျိူးရော ကိုအောင်ပါသဘောကျစွာ တဟားဟားရယ်ရင်း ကိုမျိုးက ” အာ့ဆို ပါးစပ်လိုးတာပဲ ရိုက်ခိုင်းပြီး ငအောင်ကိုနောက်က လိုးခိုင်းပေးမယ် ကျန်တဲ့အဖုတ်လိုးတာ ဘာညာကိုတော့ကင်မရာတည်ချိန်ပြီး အဆင်ပြေသလိုရိုက်လိုက်မယ် ဘယ်လိုလဲ ?.. ” ဟုတ် အကိုတို့သဘော မြလေးက အလိုးခံချင်တာပဲသိတော့တာ ခ်ခ် „ တကယ်ပင် အခုထိ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုထိတို့မှုမရှိသေးပေမယ့် ပါးစပ်အလိုးခံရတာနှင့်ပင် စိတ်ကထိန်းမရ ဘာမှမဆိုင် မပက်သက်သောယောက်ျားနှစ်ယောက်ကို အလိုးခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်က အပျိုစင်မိမိကို အရှက်မဲ့လောက်အောင်ခံချင်စိတ်ပြင်းပြစေသည်..။
မြလေးစကားကြောင့် ကိုအောင်တို့ပိုမိုအကြိုက်တွေ့ကာ ကိုမျိုးက ခပ်သွက်သွက်ပင် ပါးစပ်ထဲလီးထိုးထည့်ကာညှောင့်ရင်း လက်တစ်ဘက်ကလည်း ခါးကုန်းကာ နို့တွေနယ်ပေးလာသည် ကိုအောင်ပန်းထားသည့်လီးရည်အပင် ကိုမျိုးလီးရည်တွေပါ စိုစွတ်လာသည်မို့ နှုတ်ခမ်းဒေါင့်(ထောင့်)မှ တံတွေးနဲ့သုတ်ရည်တွေ ရောစွက်ကာစီးကျရင်း တုတ်ခိုင်လွန်းသည့်လီးကြီးက မဆန့်မပြဲဝင်ထွက်ရင်း ” အားး မြလေး ငုံ့ ငုံ့ „ ပြောပြောဆိုဆိုပင် ခေါင်းကိုဖိချရင်း ခါးပေါ်ဝဲကျနေသော ဆံနွယ်တွေကိုဆွဲယူလိုက်ကာ လီးကိုရစ်ပက်ရင်း ခေါင်းပေါ်လီးတင်ကာ ဖိလိုးလိုးသည် သိပ်မကြာ ဆယ်ချက်ခန့်ဖိလိုးလိုက်သည့်အခါမှာတော့ လီးထိပ်မှသုတ်ရည်တွေပန်းထွက်ကာခေါင်းပေါ်မှာ ရွှဲသွားသည် တကယ်ဆို မြလေးရှက်သင့်ပေမယ့် ကိုမျိုးရဲ့ထိုအပြုအမူကို စွဲမက်မိကာ စိတ်လည်းပိုထန်လာသည်..။
( နှင်းအကြိုက်ပါနော် ခ်ခ် ) ပွယောင်းကာ လီးရည်ရွှဲနေသောဆံနွယ်တွေကို တစ်ချက်ကိုင်ကြည့်ရင်း ” ကိုအောင် အဲ့ဖုန်းကို မှန်တင်ခုံပေါ်ကနေ ချိန်တင်လိုက် အကိုက ပထမမို့ မြလေးကိုအရင်လိုးနော် „ ကိုအောင်က ခေါင်းညိတ်ခါ မှန်တင်ခုံဆီသွားသည် ကိုမျိုးက မြလေးရဲ့အဝတ်အစားတွေကို တစ်ခုမပျန်ချွတ်ပြီး ဖြူဖွေးကာ သွယ်လျလှပသော အချိုးအစားနှင့် လုံးကာတင်းနေသောနို့စိုင်တွေကို တစ်ချက်ကိုင်ရင်း ” လှလိုက်တာမြလေးရယ် တကယ်ပဲ ကိုမျိုးစကားကြောင့် မြလေးကသဘောကျစွာ ခစ်ခနဲရယ်ရင်း မျက်နာလေးချီ နှခမ်းလေးစူကာ ” ဘာလဲ လှရင် အပျော်မယ်မလုပ်ရဘူးလာ” ဟင် ဘယ်သူလဲ အပျော်မယ်က မြလေးစကားကြောင့် ကိုမျိုးက အံ့ဩဟန်နှင့် မျက်လုံးကြီးပြူးကာမေးသည်” မြလေးလေအကိုရဲ့ ဘာလဲ အကိုက မြလေးကိုလိုးရတာ မပျော်လို့လား ပြော „ စိတ်ဆိုးသလိုလေသံလေးနဲ့မေးလိုက်တော့ ကိုမျိုးက ကပြာကယာပင် ” အာ မပျော်ပဲနေမလားမြလေးရဲ့ အခုလိုမျိုး ဖာသည်တောင်အလိုးခံမှာမဟုတ်ဘူးလေ ဒါမဲ့ မြလေးက အပျော်မယ်မဟုတ်ပါဘူးမြလေးရဲ့ „ ကိုမျိုးရဲ့အဖြေကိုသဘောကျစွာပြုံးမိရင်း ကိုအောင်က ခါးလေးကို ဆွဲမြှောက်လာသည်မို့ အလိုက်သင့်ကုန်းပေးရင်း တစ်ဖန်မိမိရှေ့မှာ ဒူးနှစ်ချောင်းထောင်ကာ လှဲနေသောကိုမျိုးရဲ့လီးကြီးပို ဆုပ်ကိုက်ရမ်းရင်း ” အာ့ဆို မြလေးက ဘာလဲဟင် ? ” အ အား ကိုအောင် „ ကုန်ပေးထားသောမိမိကို ကိုအောင်က နောက်ကနေ အနည်းငယ်စိုနေသောအဖုတ်လေးထဲကို လက်ခလည်ထိုးထည့် မွှေလိုက်သည်မို့ ဆစ်ခနဲကျဉ်သွားကာ ငြီးမိရသ
” မြလေးက အကိုတို့ရဲ့ အပျော်မယားလေ „ ” ရှင် ဘာ ဘာလို့လဲဟင် „ ကိုမျိုးရဲ့သက်မှတ်ချက်ကို တကယ်နားမလည်သည်မို့ လီးကိုင်ဆော့တာကိုရပ်ရင်း မေးမိတော့ ” စဉ်းစားကြည့်လေမြလေးရဲ့ ဖာသည်ဆို ပိုက်ဆံပေးရမယ် ရည်းစားနဲ့ တကယ့်လင်မယားဆိုရင်လဲ ဘယ်လိုနှစ်ယောက်အလိုးခံမလဲလို့ အာ့ကြောင့် ပိုက်ဆံလဲမပေးရ နှစ်ယောက်တစ်ပြိုင်ထဲအလိုးခံတဲ့မြလေးက အပျော်မယားပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား„ ကိုမျိုးရဲ့အဖြေကို မျက်လုံးလေးမှေးကာ စဉ်းစားကြည့်ရင်း ရှက်ပေမယ့် သဘောကျမိသည်မို့ ” အင်းနော် အကိုပြောတာလဲ ဟုတ်တာပဲနော် ခ်ခ် အာ့ဆိုအကိုတို့က မြလေးရဲ့ယောက်ျား မြလေးက အကိုတို့ရဲ့ မိန်းမပေါ့ဟီးး „ ကိုယ့်ဖာသာရေရွတ်သလိုပြောပြီးမှ ရှက်မိသွားကာ ရယ်မိပြန်သည်” အ ကိုအောင် ဘာလုပ်နေတာလဲဟင် မြလေးမနေတတ်ဘူး အားး „ မြလေးတို့စကားပြောနေတာကိုဝင်မပြောပဲ နောက်ကနေအဖုတ်ကို နှိုက်လိုက် နှုက်လိုက်နှင့် ထင်သလိုလုပ်နေသည့်ကိုအောင်ကြောင့် ခါးလေးတွန့်ကာ ပြောမိသည် ” ဘာလုပ်ရမလဲမိန်းမရဲ့ မိန်းမကိုလိုးဖို့ စောက်ဖုတ်ကို လမ်းကြောင်းရှင်းနေတာလေ ” အာ ဘာမိန်းမလဲ ကိုအောင်နော်„ ကိုအောင့်စကားကြောင့် မြလေးရှက်သွားကာ ဟန့်သလိုပြောမိပေမယ့် တကယ်တမ်းကျ ရင်တွေခုန်နေသည် ”ကဲပါမိန်းမရယ် ကိုယ့်ဘက်လှည့်ပြောမနေနဲ့ ရှေ့က လင်ငယ့်လီးကို စုပ်ပေးလိုက်ဦး လင်ကြီးလဲ အခုလိုးတော့မှာ„ ကိုမျိုးရော မြလေးပါ ကိုအောင့်စကားကိုစောဒကတက်ဖို့ ကြံလိုက်ပေမယ့် ပထမ ဒုတိယဆိုတဲ့စာလေးကို သတိရသွားတာမို့ ပြန်ငြိမ်လိုက်ကာ မြလေးက ” မြလေးတို့များ ပွေချက် ယောက်ျားရတာတောင် လင်ငယ်နှစ်ယောက်နဲ့ ခ်ခ် „ ဒီတစ်ခါ မျက်စိလည်သွားတာက ကိုအောင်နဲ့ကိုမျိုးပါ နှစ်ယောက်ပဲခံနေတာကို လင်ငယ်ကိုက နှစ်ယောက်ဆိုတော့ မအောင့်နိုင်စွာ ပြိုင်တူမေးကြသည်
” နောက်တစ်ယောက်က ဘယ်သူလဲမိန်းမရဲ့ „ ” အခု ဗီဒရိုရိုက်ထားတာက ဒုတိယလင်ငယ်ကိုပြဖို့ရှင့် အခု သူ့အဖေနဲ့ သွားတွေ့နေတဲ့သူလေ„ မြလေးရဲ့အဖြေကြောင့် ဟိုနှစ်ယောက်သဘောကျသွားကာ ” မှတ်စမ်း ကိုဦးကတော့ ဒီတစ်ခါ ခံရပီဟေ့ ဟားဟား” ကိုအောင်ကပြောပြောဆိုဆိုပင် အစွမ်းကုန်မာထန်နေသော သူ့လီးကြီးကို ကိုင်လိုက်ကာ မြလေးရဲ့အဖုတ်ကို ပွတ်ထိုး ထိုးသည် ” ကို ကိုအောင် အ အား ဘာလုပ် ဟင့် ယားတယ်ယောက်ျားရဲ့„ လီးရဲ့အထိအတွေ့က ဒါပထမဆုံးမို့ မြလေးမှာ ထွန့်ထွန့်လူးသွားရသည်သိပ်တော့လှုတ်ရှားခွင့်မရ လီးအစုပ်ခံနေသည့်ကိုမျိုးက မြလေးခေါင်းကိုကိုင်ကာ ပါးစပ်ကိုလီးတပ်ပြီး ဆောင့်နေသည် ပေါင်နဲ့ညှပ်လိုက် ခေါင်းကိုင်ဆောင့်လိုက်လုပ်နေသည်မို့ ဆံပင်တွေလဲ ဖွာလန်ကျဲကာလီးပေါ်ပုံကျလာသည်မို့ လီးအဝင်အထွက်မှာ ဆံချည်တွေက ရစ်ထွေးပါလာပြန်သည် ” အားး အု အွတ် အွတ် „ နောက်ကကိုအောင်က မြလေးဆောက်ဖုတ်ထဲကိုလီးအထည့် ကိုမျိုးကလည်း ပါးစပ်ထဲလီးသွင်းကာ ခေါင်းကိုင်အဆောင့်နှင့် တိုက်ဆိုင်သွားသည်မို့ မြလေးမှာ အသံထွက်အောင်ပင်အော်ခွင့်မရ ရမက်စိတ်နဲ့ထန်မိပေမယ့် တကယ်တမ်းလီးအဝင်ခံရချိန်မှာတော့ အဖုတ်လေးက ခံနိုင်စွမ်းမရှိဟန် တစ်ခံနေသည်မို့ မြလေးမှာ မျက်ရည်လေးပင်ဝဲသွားရသည် နာကျဉ်စိတ်နဲ့ ရုန်းကြည့်ပေမယ့် ပါးစပ်ထဲလီးအဆုံးထည့်ကာ ခေါင်းကိုခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့ တင်ပလ္လင်ခွေသလို ခြေသလုံးသားတွေနဲ့ ဆွဲဖိထားသည်မို့ လွတ်လပ်ခွင့်တော့မရပေ ထို့အတူ ကိုအောင်ကလည်း မညှာမတာဆောင့်လိုးလိုက်သည်မို့ ခါးလေးကော့သွားသည်အထိဖြစ်ရကာ မျက်ရည်ပင်ကျသည်အထိ နာသည်” ဗျစ် ဗွစ် ဖက် ဖက် ဖက် ဖက်„ ” အွက် အု အူး အွတ်အွတ်..ဟူသောလဥရိုက်သံနှင့် ခါခေါင်ထောက်အောင်ပါးစပ်လိုးသံတွေက ဆူညံနေသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လီးအဝင်အထွက်ချောလာကာ အရင်လိုမနာတော့ပဲ အကောင်းဘက်သို့ရောက်လာသည်မို့ မြလေးမှာ ဖင်ကိုအစွမ်းကုန်ကော့ရင်း ကိုအောင်ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေကိုအလိုက်သင့်ပင့်ခံကာ တစ်ဖန်လီးကြီးကိုလည်း ဆောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေနှင့် ညှစ်ယူဆွဲထားတတ်လာသည်
ကိုမျိုးကို ခြေခွထားတာကိုဖယ်ရင်း ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ပါးစပ်လိုးသည် အခုမှပင်မြလေးလည်း ပါးစပ်အနားယူကာ အမောပြေရန် အသက်ကိုအလုအယက်ရှူရင်း ” အားး ယောက်ျား ဆောင့် ဆောင့် မိန်းမဆောက်ဖုတ်လေး ကွဲချင်ကွဲပါစေ ဆောင့် ဆောင့်စမ်းပါ အား ကောင်းတယ် ရှီး..„ ခါးကိုညွှတ်ချရင်း ခေါင်းလေးမော့ကာပြောလာသည့်မြလေးကြောင့် ကိုအောင် ပိုဖီးလ်မိကာ စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ မြလေးရဲ့ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ဆွဲကာ အားနဲ့ရိုက်ဆောင့်သည် ” ဖက် ဖက် ဖက် ဖက် ဖက် ဖက် ရိုက်သံတွေဆူညံကာ အချက်သုံးဆယ်လောက်ဆောင့်ပြီးချိန်မှာတော့ ကိုအောင်ကလိုးတာကိုရပ်ရင်း မြလေးမျက်နာရှေ့လာရပ်ကာ နှဖူးပေါ်ကို လီးရည်တွေပန်းချသည် ပျစ်ချွဲနေသည့်လီးရည်တွေက နှဖူးမှတဆင့်ပါးတစ်လျောက်လိမ့်ဆင်းလာကြသည် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြိးသွားသည့်ကိုအောင်က ကျေနပ်သွားဟန်နဲ့ သူ့လီးမှာပေကျံနေသော သုတ်ရည်တွေကို မြလေးဆံပင်တွေနဲ့ ဆွဲသုတ်သည် ပြောင်လောက်မှ စားပွဲကထိုင်ခုံမှာသွားထိုင်ကာ ဘီယာတစ်ဗူးဖောက်ပြီး သောက်နေသည်
ဒီတစ်ခါ လင်ငယ်အလှည့်နော် မိန်းမ „ ကိုမျိုးစကားကြောင့် မြလေးက ယဲ့ယဲ့လေးပြုံးကာခေါင်းညိတ်ရင်း ” အကိုက ဘယ်လိုလုပ်ချင်လို့လဲဟင်” ကိုယ်က ပါးစပ်ရော ဆောက်ဖုတ်ရောနောက်မှလိုးရမှာဆိုတော့ ဘယ်သူမှမလိုးရသေးတဲ့ဖင်ကိုပဲ အရင်လိုးချင်တာမိန်းမရဲ့.. ကိုမျိုးစကားကြောင့်အနည်းငယ်လန့်မိပေမယ့် မိမိကအပျော်မယားအဖြစ်အသုံးတော်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသာမို့ မငြင်းချင်တော့ နှုတ်ခမ်းထက်မှာ တွဲခိုနေသော ကိုအောင်ရဲ့လီးရည်ကို လက်ခလည်နဲ့တို့ခြစ်ယူပြီးဖင်ဝကို သုတ်လိုက်ရင်း ”အင်းပါ အကိုပျော်ရင် မြလေးကခံရမှာပေါ့ ပြော ဘယ်လိုနေပေးရမလဲ ” ကိုမျိုးကျေနပ်သလိုပြုံးရင်း မြလေးလက်ကိုကိုင်ကာထစေသည် ပြီး..ကုတင်ခေါင်းရင်းအမှီတန်းကိုကိုင်စေကာ ဒူးထောက်ခိုင်းသည် ခါးကိုအနည်းငယ်ဖိချကာ ဖင်ကိုကော့ထားစေသည် စူနေသည့်ဖင်ကိုတံတွေးထွေးချကာ လက်ညှိုးထိုးကာ မွှေသည် ” အားး ယောက်ျား မရဘူးထင်တယ် လက်တောင် အောင့်ပီးနာတယ် အဖုတ်ပဲလိုးပါလားဟင်„ တကယ်ပင် လီးနဲ့မဆိုထားနှင့် လက်ကလေးတစ်ချောင်းပင် အဝင်မသက်သာသည်မို့ မြလေးငြင်းသည်
ကိုမျိုးက ဘာမှမပြောပဲ ဟိုဟိုဒီဒီဝေ့ဝဲရှာရင်း အစောက မိမိဝတ်လာခဲ့သော အိင်္ကျီစပန့်လေးကိုဆွဲဖျဲလိုက်သည် ” ဟင် ယောက်ျား ဘာလုပ်မို့်လဲဟင်” ” မိန်းမလက်တွေကို တုပ်ဖို့လေ ကြိုးမရှိလို့ ဖြဲလိုက်တာ ဖင်ကိုပဲရအောင်လိုးချင်တာ ရုန်းနေမှာစိုးလို့လေ” ဆုံးဖြတ်ထားဟန်ရှိသည့်ကိုမျိုးအဖြေကြောင့်ငြင်းလဲမရနိုင်တာမို့ အသာငြိမ်နေမိတော့ လက်နှစ်ဖက်ကို ကုတင်ခေါင်းရင်းမှ ဘားတန်းနဲ့ ကပ်တုပ်ထားသည် တကယ်ပင်ရုန်းမည်ထင်၍လားမသိ ကျကျနနပင် ကျစ်နေအောင် အသေချည်သည် ပြီး မှန်တင်ခုံပေါ်မှ ခေါင်းလိမ်းဆီကိုယူကာ ဖင်နှင့်တင်ပါးပါ် လောင်းချသည်စိုရွှဲသွားတော့မှ နေရာနှံေ အာင်ပွတ်ရင်း ဖင်ဝကိုလီးတေ့သည် အခုတော့ ခေါင်းလိမ်းဆီရဲ့အကူအညီနဲ့အဝင်သက်သာမလား မသိရသေးပဲ ကိုမျိုးဖင်လိုးမည့်အချိန်ကို ရင်ခုန်စွာစောင့်ဆိုင်းနေမိသည် ကိုမျိုးက ဖင်ထဲကို ဒစ်ဝင်အောင် ဖိသွင်းသည်.. ” အား အကို အဟင့် နာသေးတယ် „ ကြောက်စိတ်နဲ့ဖင်ကိုရှုံ့ထားမိတာကြောင့်လီးအဝင်ခက်သလို ဖင်လဲမသက်သာမှန်း အခုမှစအလိုးခံရသူမြလေးကတော့ မသိရှာ..ကိုမျိုးကသိပေမယ့် ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမပြောချင်တော့တာမို့ ဖင်ဝကိုလီးတေ့လျက်ကပင် လက်ကကျောနဲ့နို့အုံတွေကိုပွတ်သပ်ချော့မြူလိုက်သည် ဖြူမွှေးကာ အမွှေးနုလေးတွေယှက်ဖြာနေသောလည်တိုင်လေးကို နမ်းရင်း လီးနဲ့ဖင်ဝအနေအထားကို စိတ်နဲ့ခံစားချိန်ဆရင်း ရုတ်တရက်ဖိချလိုက်သည်
အားးးးးးးး အနမ်းမှာသာယာပြီး ခဏမေ့နေသောမြလေး မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာ ဆောင့်သွင်းခံရသည်မို့ ခါးလေးလိမ်ကာ အော်မိသည် လီးက ဖင်ထဲကိုဒစ်မြုပ်သည့်အပြင် တစ်ဝက်နီးပါးဝင်သွားသည်မို့ ကိုမျိုးက အကျွတ်မခံ ခါးကိုဖိကာဖင်ကိုကော့အောင်ပြုပြီး ညှောင့်သွင်း သွင်းသည် တင်းကြပ်နေသည့် အဝင်အထွက်ကြားမှာ မျက်နာလေးရှုံကာ အံကြိတ်ခံနေမိသည် ခေါင်းလိမ်းဆီကြောင့်လား သုတ်ရည်ကြောင့်လားတော့မသိ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အဝင်အထွက်မှန်လာသလို အရမ်းလည်းမနာတော့ အောင့်သက်သက်နှင့် အဖုတ်အလိုးခံရတာနှင့်မတူပဲ ကောင်းလာသည်
အ အ အဟင့် ယောက်ျား လိုးလိုး အားး အား အား တကယ်ပင် စလိုးစဉ်ကနှင့် ဘာမှမဆိုင် လိုးတာကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဖင်အလိုးခံရတာကို စွဲမက်မိလာသည်( အာ့ တကယ်နော် ခ်ခ် ) ဖော်မပြနိုင်သည့်အရသာတွေထဲမှာ နစ်မျောနေခိုက် နှစ်ချီပြီးကာ ဘီယာသောက်နေသောကိုအောင်တစ်ယောက် မြလေးတို့ရဲ့လိုးသံအော်သံတွေကြောင့်မနေနိုင်စွာ လီးပြန်တောင်လာသည်မို့ ကုတင်ပေါ်တက်လာကာ မြလေးပါးစပ်ထဲလီးထိုးထည့်ကာလိုးရင်း လီးရည်တွေကိုပါးပေါ်ပန်းချကာ ” မိန်းမ နောက်လည်းလိုးမယ်နော် ရလား ” အ အား ဟုတ် ရတာပေါ့ယောက်ျားရဲ့ မိန်းမလဲ စွဲနေပြီးရှင့် အ အား တကယ်ပင်စွဲမက်မိသည်မို့ လက်ခံစကားပြောမိတော့ ကိုအောင်က ” ချစ်လို့လားမိန်းမ ကိုယ်ကတော့ချစ်မိသွားပြီကွာ„ ကိုအောင်က ပါးကိုလီးနဲ့ပွတ်ထိုးဆော့ကစားရင်းပြောသည် မြလေးလည်း မညာချင်တာမို့ ” ဟင့်အင်း မချစ်ဘူး ချစ်ပါစေလို့လဲ မရည်ရွယ်ဘူး အကိုတို့ရဲ့အပျော်မယားပဲလေ မချစ်လဲ လိုးလို့ရပါတယ်„ မြလေးရဲ့အဖြေစကားကြောင့် ကိုအောင်ရောကိုမျိုးပါ ကျေနပ်သွားကြသည် သူတို့လည်း ချစ်လို့လိုးကြတာမှမဟုတ်ပဲလေ ” အဟား ကြိုက်သွားပြီဟေ့ အဲဒါဆိုလဲ လိုးပေးရမှာပေါ့
အသံကတပြိုင်ထဲလိုလိုထွက်လာကာ တံခါးအဝင်ဝမှာ ကိုယ်လုံးတီးတွေနှင့်ရပ်နေကြသောဦးဖေနှင့်ကိုကိုကြောင့် မြလေးတအံ့တဩဖြစ်မိပေမယ့် ကိုမျိုးက ဖင်အလိုးမပျက်သလို ကိုအောင်ကလဲ အံ့ဩဟန်မပြ ” ခွင့်လွှတ်ပါသမီးရယ် သမီးအရင်းလိုသက်မှတ်ချင်ပေမယ့်အခုလိုမြင်ရတော့ ဦးဖေစိတ်မထိန်းနိုင်လို့လိုးပါရစေတော့။ဦးဖေရဲ့ခွင့်တောင်းမှုကို မြလေးဘာမှပြန်မပြောမိခင်မှာပဲ ကိုမျိုးက ” ခဏနော် အန်ကယ် ဖင်လိုးတာပြီးတော့မှာပါ ခဏလေးပဲ” ပြောလည်းပြော အဆက်မပြတ်လည်းဆောင့်လာတာမို့ ဆောင့်ချက်နဲ့အညီ တအင်းအင်းညီးပေးမိသည် ”အား ပြီး ပြီး ပြီးပြီ ဖင်ထဲစိမ်ကာပြီးလိုက်သည်မို့ လီးရည်ရဲ့ပက်ဖျန်းမှုကိုနွေးခနဲခံစားမိသည် ထို့အတူ လီးပြန်ထုတ်ချိန်မှာတော့ လီးနဲ့အတူသုတ်ရည်တစ်ချို့ပါ ဖင်ဝအထိတွဲပါလာသည်
ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကိုအလိုးခံပြီးလို့မှနားခွင့်မရ နောက်ထပ်ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရဲ့ ဖင် ပါးစပ် ဆောက်ဖုတ်တို့ကို အလဲအလှယ်လိုးကြတာကိုခံရင်း သူတို့ပြီးတိုင်း လာလာပန်းကြတာကြောင့် မျက်နာနဲ့ခေါင်းပေါ်လဲ သုတ်ရည်တွေရွှဲရွှဲစိုကာ သတိလစ်မတတ်အထိ ခံပေးရသည်လေးယောက်သား အားရပါးရ နှစ်ယောက်နားနှစ်ယောက်ဝင်ပုံစံနဲ့ စိတ်ကျေနပ်အောင်လိုးပြီးမှ ချည်ထားသောကြိုးကို ဖြည်ပေးသည် မြလေးရဲ့မျက်နာကိုပင်မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင် သုတ်ရည်တွေက ဖုံးလွှမ်းနေသလို အကြိမ်ကြိမ်ပြီးထားသည့်လီးရည်တွေက ပါးစပ်ထဲမှ တစ်စက်စက်ယိုစီးကျလျက်.. တကယ်တော့ ဒီလိုးပွဲမှာ ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်ကြသလို ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူကိုမှ ချစ်ဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့တာကို အကြိမ်ကြိမ်ဆင်နွှဲခဲ့သည့်လိုးပွဲကပင် သက်သေခံနေပါတော့သည်။ .ပြီး ပါ ပြီ